‘Munhu anorarama ura huri kunze kwedumbu’ | Kwayedza
‘Munhu anorarama ura huri kunze kwedumbu’
21 Dec, 2018 - 00:12	 2018-12-20T09:51:58+00:00 2018-12-21T00:00:06+00:00 0 Views
CHAMANGWIZA wechipatara cheHarare Central Hospital, Dr Nyasha Masuka, vanoti vanhu vanenge vaine chirwere chekuwora ura vanogona kuvhiiwa, ura hwacho hwosiiwa huri kunze kwedumbu sezvaikaitwa kumurume wekwaMurambinda, kuBuhera, uyo ari kurarama matumbu ake ari panze.
Nyaya yaApprove Dowororwa (42) yakabuda muKwayedza svondo rapera pamberi apo aitsvaga rubatsiro rwemari yekuti arapwe zvichitevera kuvhiiwa kwaakaitwa pachipatara ichi ndokusiiwa ura hwake huri kunze.
Oparesheni iyi anoti akaiitwa musi wa9 Nyamavhuvhu zvichitevera dambudziko raaive naro rekupisa kwemudumbu zvakanyanyisa – ndokunzi adzokere kumba ura hwake hwakati yacha panze.
Dr Masuka vanoti hapana chakaipa panyaya yekuti ura hwaDowororwa huri kugara huri panze kana kuchitariswa chirwere chaanacho.
“Murume uyu aiva nedenda rinonzi colostomy apo akabviswa ura hwaiva hwawora hwaiva hwakareba mamita 7. Hapana chakaipa, ura hunoburitswa kunze achitorarama zvakanaka sezvaakaita izvi.
“Asi akambopihwa zuva rekudzoka akarega. Kana zvinhu zvedu zvaita zvakanaka, achashevedzwa ura hwake hwodzoserwa mudumbu,” vanodaro Dr Masuka. Vanoti kune vamwe vanhu vanogona kutorarama kweupenyu hwese ura hwavo huri kunze kwedumbu.